Uninzi lwamava amnandi ngeli xabiso
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSuchandra And Sourya
Le asiyo-AirBnB eqhelekileyo; hayi indawo esecaleni, kodwa ngumsebenzi wothando, owakhiwe ngothando, amandla kunye nokutshiza kokuyila, owakhelwe ukukunika ithuba elitsha lobomi. Le yindlu ebanzi kakhulu yesitudiyo egcwele izinto zangoku kunye negumbi lokuhlambela elinazo zonke izinto zangoku. Into esiziqhayisa ngayo, nangona kunjalo, yi-aesthetics le ndawo ifakwe kuyo, ukunethezeka kunye nokuphumla okukunikayo kunye ne-terrace eyenza iintliziyo ziphephe; indawo engcwele eyenzelwe wena.
-Ukutya okumnandi esikunikezayo koko kudlalwa ziindwendwe. Iphekwe ekhaya kwaye ineentlobo ngeentlobo zokutya. Okukhethekileyo kwethu kukwenyani kwaye kumnandi ukutya kwaseBengali.
-Igumbi lihlotshiswe kwisitayela se-Swiss Chalet kunye nophahla lwamaplanga, olunophahla.
-Indawo yophahla ihonjiswe kakuhle kwaye inojingi kunye nezihlalo.
-Isidlo sakusasa siyancomeka. Konke okunye ukutya kuyahlawuliswa
- Kukho iketile yombane kwigumbi lakho, unokwenza iti kunye nekofu nanini na xa uziva uthanda.
-Kukho igadi eluphahleni kunye nenye ezantsi.
Sibekwe kwindawo efanelekileyo, iindlela ezinkulu kwaye i-metro ikufuphi. Umbindi wesixeko ukude isiqingatha seyure.
Indawo eyozelayo, enamagqabi kanye ecaleni kwe-EM Bypass. Le ndawo ibonelela ngeyona ndawo intle yehlabathi, ukungxama kwesixeko kunye nokuzola kwedolophu. Umbindi wesixeko kukuhamba nje isiqingatha seyure kwaye unokufikelelwa ngemetro.
Ivenkile enkulu yeMetro Cash kunye neCarry yimizuzu emi-2 ukusuka kwindlu yethu.
-I-Ruby yokuwela i-5 imizuzu kude.
-South City Mall yi 15-20 imizuzu drive.
-Hiland Park Mall luhambo lwemizuzu eli-10
-I-Acropolis mall yimizuzu eyi-7 kude.
-Isitalato sasePark sikwimizuzu engama-30 kude.
-IMarike eNtsha ikwimizuzu engama-40 kude.
-Iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile ezinkulu kunye nee-multiplexes zigcwele apha.
Umbuki zindwendwe ngu- Suchandra And Sourya
Sihlala apha, kwaye siya konwaba ngakumbi ukonwabisa kunye nokusebenzisana nawe
USuchandra And Sourya yi-Superhost